श्रीमती अर्कैसंग लागेको थाहा पाएपछि प्रहरी हवल्दारले गरे पिडा सहन नसकेर आत्महत्या, श्रीमानको मृत्युको खबर थाहा पाएपछि श्रीमतीले भनीन् मलाई प्रेमी बिशालको जिम्मा लगाइदिनु ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/श्रीमती अर्कैसंग लागेको थाहा पाएपछि प्रहरी हवल्दारले गरे पिडा सहन नसकेर आत्महत्या, श्रीमानको मृत्युको खबर थाहा पाएपछि श्रीमतीले भनीन् मलाई प्रेमी बिशालको जिम्मा लगाइदिनु !
श्रीमती अर्कैसंग लागेको थाहा पाएपछि प्रहरी हवल्दारले गरे पिडा सहन नसकेर आत्महत्या, श्रीमानको मृत्युको खबर थाहा पाएपछि श्रीमतीले भनीन् मलाई प्रेमी बिशालको जिम्मा लगाइदिनु !
सुनसरी – सुनसरी जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवल्दार ओमप्रकाश खतिवडाको देहत्याग घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । उनले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडीको पाटा खुल्दै जान थालेका छन् । मोरङको उर्लाबारी–९ राजघाटका हवल्दार खतिवडाले देहत्याग गरेका थिए । उनका दाई , दिदी लगायत परिवारका सदस्यले घटनाको कारणवारे अचम्म लाग्दो वयान दिएका छन् । श्रीमानले देहत्याग गरेको घटना सुनाउन जाँदा उनको श्रीमतीले अनौठो कुरा भनेकी थिइन् ।
ओमप्रकाशको दिदीले पनि श्रीमतीलाई अति माया गरेको भाईले बुहारीवाट घात पाएपछि देहत्याग गरेको बताएकी छन् । एकतर्फी माया गरेको मान्छेले नै घा’त गरेपछि अ’सह्य भएको हुनसक्ने बताइन् । उनले बुहारीकै कारण घटना भएको दावी गरेको बताएका छन् । प्रहरीले बुहारी दीक्षा खतिवडा र उनकी प्रेमी भनिएका विशाल तामाङलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । असार १६ गते आफैले बोकेको पे स्तोलले क’न्चटमा प्र हार गरी हवल्दार खतिवडाले देहत्याग गरेका थिए । ‘मृतक खतिवडालाई पहिले देखि नै आफ्नो श्रीमती अरुसँग लागेको शंका गर्दै आएका थिए ।
दीक्षा, प्रहरी हवल्दार ओमप्रकासका श्रीमती हुन् । उनीहरुलाई मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–२ राजघाटबाट पक्राउ गरिएको हो । प्रहरी नायब उपरिक्षक शर्माले भन्नुभयो, ‘मृतक खतिवडालाई पहिले देखि नै आफ्नो श्रीमती अरुसँग लागेको शंका गर्दै आएका थिए । श्रीमती दीक्षा र विशालकै कारण उनी डि प्रेसनमा पुगेका थिए ।’ कल डिटेल अनुसार देहत्याग गरेको समयमा उनले श्रीमतीलाई र विशाललाई फोन गर्दा लामो समय दुबैको मोबाइल व्यस्त भएपछि डि प्रेसन र आवेशमा आएर आफैले देहत्याग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
देहत्याग दु’रुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेका विशाल तामाङ खतिवडाकै छिमेकी हुन् । देहत्याग दु’रुत्साहन गरेको प्रमाणित भए दीक्षा र विशाललाई ५ वर्ष जेल सजाय र ५० हजार जरिवाना हुन सक्छ । देहत्याग दु’रुत्साहन बारे अपराध संहिताको दफा १८५ को उपदफा १ मा ‘कसैले कसैलाई देहत्याग गर्न दु’रुत्साहन गर्न दिने वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्नेलाई पाच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैया जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ । यस घटनाको बारेमा तल २ भिडियो रहेका छन् हेर्नुहोला
विवाह बन्धनमा बाधिएको २ दिनपछि तस्विर शेयर गर्दै कानुनी बिहे गर्नुको कारण खुलाए गायक निशान भट्टराईले
प्रमोसन भएपछि खुसी भएका गुरुङ्ग दशैँमा छुट्टीमा आउँछु भनेर डिउटीमा निस्केका थिए !
प्रेम सम्बन्ध मजबुत बनाउने ७ तरिका